TEC ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထောက်ပံ့သူများနှင့်အတူ 1350nm DFB Coaxial Pigtailed Laser Diode - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > Coaxial pigtailed လေဆာ diodes > TEC နှင့်အတူ 1350nm DFB Coaxial Pigtailed လေဆာ Diode
TEC နှင့်အတူ 1350nm DFB Coaxial Pigtailed လေဆာ Diode
1350nm DFB Coaxial Pigtailed Laser Diode TEC ကိုယေဘုယျအားဖြင့်အလင်းအရင်းအမြစ်တည်ငြိမ်စေရန်သို့မဟုတ်ပြုပြင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုလေဆာအရင်းအမြစ်စမ်းသပ်ယန္တရားများနှင့် OTDR ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Laser diode သည် CWDM-DFB ချစ်ပ်၊ built-in isolator၊ built-in monitor photodiode နှင့် TEC cooler နှင့် SC / APC, SC / PC, FC / APC, FC / PC optical fiber connector တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ optical fiber နှင့် pin definition တို့၏အရှည်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ output output ကို 1MW, 1270nm ~ 1610nm CWDM လှိုင်းအလျားကနေရရှိနိုင်ပါသည်။
TEC နှင့်အတူ 1350nm DFB Coaxial Pigtailed လေဆာ Diode ၏ 1. အကျဉ်းချုပ်
TEC နှင့်အတူ 1350nm DFB Coaxial Pigtailed လေဆာ Diode ၏ 2. နိဒါန်း
1350nm DFB Coaxial Pigtailed Laser Diode TEC ကိုယေဘုယျအားဖြင့်အလင်းအရင်းအမြစ်တည်ငြိမ်စေရန်သို့မဟုတ်ပြုပြင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုလေဆာအရင်းအမြစ်စမ်းသပ်ယန္တရားများနှင့် OTDR ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Laser diode သည် CWDM-DFB ချစ်ပ်၊ built-in isolator၊ built-in monitor photodiode နှင့် TEC cooler နှင့် SC / APC, SC / PC, FC / APC, FC / PC optical fiber connector တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ optical fiber နှင့် pin definition တို့၏အရှည်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ output output ကို 1MW, 1270nm ~ 1610nm CWDM လှိုင်းအလျားရရှိနိုင်ပါသည်။
TEC နှင့်အတူ 1350nm DFB Coaxial Pigtailed လေဆာ Diode ၏အင်္ဂါရပ်များ
TEC နှင့်အတူ 1350nm DFB Coaxial Pigtailed လေဆာ Diode ကိုအသုံးပြုခြင်း ၄
TEC နှင့်အတူ 1350nm DFB Coaxial Pigtailed Laser Diode ၏ 5. Electro-Optical လက္ခဏာများ (T = 25â„) ။
အလယ်လှိုင်းအလျား အိုင်စီ CW, PO = PF 1347 1350 1353 nm
TEC နှင့်အတူ 1350nm DFB Coaxial Pigtailed Laser Diode ၏ထုပ်ပိုးပုံဆွဲခြင်းနှင့် PIN-OUT အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) ကို
TEC နှင့်အတူ 1350nm DFB Coaxial Pigtailed Laser Diode ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း
hot Tags:: 1350nm DFB Coaxial Pigtailed Laser Diode TEC နှင့်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်သူများ၊ စက်ရုံစိတ်ကြိုက်၊ အမြောက်အများ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင်လုပ်သည်၊